Daawo Sawirrada: Ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray Jabuuti – Radio Muqdisho
Daawo Sawirrada: Ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray Jabuuti
Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa dalka Jabuuti tababar ugu soo xiray ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya.
Munaasabadii xiritaanka tababarkaasi waxaa goob joog ka ahaa taliyaha booliiska Soomaaliya, dhiggiisa dalka Jabuuti iyo saraakiil kale.
Taliyaha ciidanka Booliiksa Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo khudbad dheer ka jeediyay munaasabaddii xiritaanka tababarkaasi ayaa dowladda Jabuuti uga mahadceliyay tababarrada ay u fidiso ciidamada booliiska Soomaaliya.
Jeneraal Xaamud wuxuu kula dardaarmay ciidamadaasi iney shaqadooda ku dabaqaan aqoonta ay ka kororsadeen tababarka ay soo qaateen ugana faa’iideeyaan ciidamada kale een fursadda u helin tababarkan oo kale.
Madaxweynaha iyo madaxda maamullada oo Baydhabo kula kulmay waakiillada Beesha Caalamka